Umdlalo omusha okhuthaza nofundisa imbokodo
UNQOBILE Khumalo olingisa indawo kaNqobile emdlalweni omusha othi Nqobile ozoqala kwiMzansi Magic esontweni lokuqala kuJulayi. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
Nokubongwa Phenyane | June 24, 2021
INKAMPANI yokuqopha entsha i-AVAD Media, ka-Ayanda Burotho, Adze Ugah noNobuntu Webster, ivundulule ithalente elisha kwezokulingisa okunguNqobile Khumalo ozobe elingisa indawo ephambili kaNqobile emdlalweni omusha kwiMzansi Magic.
Umdlalo othi Nqobile uzoqala ukubonakala kusukela ngoJulayi 5, ngo-8, ebusuku.
Kulo mdlalo okhuthaza abantu besifazane ukuthi basebenze kanzima empilweni, kulindeleke ukuthi kubonakale izinkakha endimeni yokulingisa okubalwa kuzo uMagic Hlatshwayo, Nomsa Nene, Lilian Dube, Abdul Khoza noNhlanhla Mdlalose.
Ekhuluma neSolezwe, uNqobile uthe isifiso sakhe ukuthi wonke umuntu wesifazane abuke lo mdlalo njengoba kukhona isifundo kuwona.
“Abantu bazoqala ukubona uNqobile esesimeni esingesihle njengoba kukhona ilungu lomndeni wakhe elishonile. Leli lunga ligwiliza emanzini endaweni yokubhukuda eyakhiwe ekhaya. Kwenzeka konke lokhu nje, ukhona ekhaya kodwa ukwenye indlu akaboni. Umyeni wakhe uyalwa naye njengoba emsolwa ngalesi sigameko. Kusukela lapho akaphili impilo ejabulisayo, kodwa kukhona konke uyazama ukuthi asebenze kanzima ukuze aqhubeke nempilo,” kusho uNqobile.
Uthe kukhona okuzofundwa ngabesifazane nabesilisa ababhekene nokuhlukunyezwa kwanoma iluphi uhlobo.
“Ekugcineni, ngenxa yokuthi usekhathele ukuhlukunyezwa, uNqobile uyasukuma azimele ukuze aphume kulesi simo abhekene naso. Engikuthanda ngalo mdlalo ukuthi ubhalwe yinkampani eholwa ngowesifazane ongulingisi u-Ayanda. Ngiyabonga ithuba abangiphe lona nozakwabo kule nkampani yabo entsha eqale ngalo mdlalo ukukhiqiza,“ kuchaza yena.
Abanye abalingisi abazobonakala kulo mdlalo kubalwa uLele Ledwaba ozobe elingisa indawo kaMampoi no-Ayanda Bandla ozobe elingisa indawo kaNtombi.
Isolezwe like labika ngamahebezi omdlalo omusha okukhona kuwo u-Ayanda Borotho no-Abdul Khoza.